Shiinaha Customized Qalabka Isgaarsiinta qalabka processing-saareyaasha, Warshad - Dongguan Guancheng qirayso Hardware Co., Ltd.
Hoyga > Mashiinka CNC > Qalabka aluminium ee aluminium ee CNC > Qalabaynta qalabka isgaarsiinta
1.CNC astaamaha aluminium lagu farsameeyo
Si si weyn loo yareeyo tirada qalabaynta, ka baaraandegidda qaababka isku-dhafan ee qaybaha uma baahna qalab isku-dhafan oo isku dhafan. Haddii aad u baahan tahay inaad beddesho qaabka iyo cabirka qaybaha, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad wax ka beddesho sawirrada qaybaha, aad u hagaajiso dariiqa qalabka makiinadda iyo habraacyada wax-soo-saarka si aad u soo saarto, oo ku habboon horumarinta alaabooyinka cusub iyo wax ka beddelka moodeelka.
2. Faa’iidooyinka waxsoosaarka aluminium ee aluminium ee CNC
2.1 Tayada wax-qabadka xasiloonida, saxsanaanta wax-soo-saarka sare, saxsanaanta wax soosaarka soo noqnoqda, si loo buuxiyo shuruudaha ka baaraandegidda aerospace, militariga, tikniyoolajiyadda elektarooniga ah iyo dhinacyada kale.
Cilladaha aluminium 3.CNC aluminium
Faa’iido darrada ka timaadda farsamaynta CNC ayaa ah in qiimaha qalabka aaladda mashiinku qaali yahay, shaqaalaha dayactirkana looga baahan yahay inay yeeshaan heer sare.
Calaamadaha kulul: Processing qalabka Isgaarsiinta qaybo processing, Shiinaha, kartoo, saarayaasha, Warshad